Sida loo Play MKV on Sony TV Si fudud
Sida loo Play MKV on TV Sony
Sony TV ciyaari karaa files MKV? Sida laga soo xigtay Sony ee goobta rasmiga ah, qaab MKV taageero TV Sony. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaha intooda badan, waxaad ka heli doontaa files MKV aad laguma ciyaari karo on TV Sony. Waa si la yaab leh, soo maaha? Ma jirto sabab macquul ah oo xooggan oo files MKV aad ku jira DTS audio (files MKV kala duwan yihiin iyadoo codecs audio kala duwan). Sony TV ayaa waafaqsan masaakiinta la DTS audio. Xaaladdan oo kale, waa inaad il audio ee MKV gudbiyo la jaan TV Sony. Waxay arrintu u muuqataa yara adag. Dhab ahaantii, waa mid aad u fudud inta aad leedahay MKV xirfadle in Sony Converter TV.
Wondershare Video Converter waa sida qalab smart aad u. Ma Xataa iyada oo aqoon waxa codec audio ee MKV u fiican Sony TV, app ha kartaa in aad beddelid files MKV si aad u qaab buuxa socon u Sony TV oo keliya ka mid ah. Markaas, habka diinta oo dhan aad qaadan doontaa dhowr daqiiqo. Ka dib markii in, waxaad daawan kartaa MKV ama MKV HD ku TV shaashad weyn. Just leeyihiin isku day ah.
Ka dib markii download, kaliya aad u leedahay weyn Sony TV video Converter lagu rakibay on your computer. Markaas, raac tilmaan-hoose si aad u ciyaaro MKV on Sony TV habsami leh.
1 Import MKV videos to this Converter Sony TV
Barnaamijyada waxa uu ku siinayaa laba hab oo sooc inay dajiyaan files MKV si aad u this video Sony TV Converter. Guji ka button in ay helaan files MKV diirada ku computer ka dibna iyaga ku shuban. Ama, si fudud u jiidi videos MKV aad rabto in aad ka kombiyuutarka si app this. Waxay la soo bandhigi doonaa sida thumbnails in ay leeg- tahay tan app ee.
2 Dooro qaabka filaayo in TV Sony
On the "Output Qaabka" Murayaad, waxa aad furan kartaa hoos-hoos liiskan app ee format, halkaas oo aad u baahan tahay si ay u tagaan "Device" ayuu> "TV'yada" category, ka dibna waxay doortaa "Sony TV" sida qaab wax soo saarka. Ayaa qaab saarka filaayo in loo habeeyey TV Sony. Waxaa haboon doonaa TV ugu fiican.
3 MKV Play on TV Sony
Ugu geeska midig hoose ee suuqa kala ah, waxaad ku dhuftay kartaa "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan diinta MKV in TV qaab Sony ah socon. Markaas, taas Video Converter dhameysan doono wax intiisa kale si toos ah. Dhowr daqiiqo ka dib, diinta video la soo dhameyn doono.
Hadda, aad wareejin karaan faylasha wax soo saarka si ay u drive USB ah, ka dibna la ciyaari files kuwaas oo ku Sony TV via USB. Ma heli karaa files wax soo saarka? Just guji "Open Folder" ikhtiyaarka daaqadan.
Sida loo Play MKV on TV Samsung
Sida loo abuuro dhinac 3D Video
Top 6 plugins laxamiistaha AVID Media u Movie Faalladaada
Sidee Baan U beddelaan File A Si An ISO?
Sida loo qasayo Pictures ee Video
> Resource > Video > Sida loo Play MKV on TV Sony